Mogadishu Journal » Kooxda Al-shabaab oo sheegtay in uu dirqi kaga badbaaday madaxweyne Xassan Sheekh
Mjournal : –Kooxda Al-shabaab ayaa war ay soo saartay waxaa ay ku sheegtay in ay weerar qorsheysan ku qaadeen maalintii shalay diyaaradii siday madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xassan Sheekh Max’uud iyo wafdigii uu hogaaminayay kuwaa oo gaaray magaalada Kismaayo.
Afhayeenka dhinaca howlgalada u qaabilsan Al-shabaab C/siis Abuu-muscab oo la hadlayay warbaahinta ku hadasha afka kooxda, ayaa sheegay in weerar qorsheysan ay shalay la beegsadeen diyaaradii siday madaxweyne Xassan Sheekh xili ay caga dhiganeysay garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo, kadib markii ay dhowr madaafiic ah ku rideen.
Sidoo kale, waxaa uu sheegay in markii ay diyaaradu caga-dhigtay garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo ku weerareen dhowr madaafiic, ah, laakiin ma jiri wax khasaare ah oo madaafiicdaas ka soo gaaray wafdiga madaxweynaha.
‘’Shalay madaxweyne Xassan Sheekh fara-cijileh ayuu nooga badbaaday, madaafiic ayaa ku weerarnay diyaaradii uu la socday, laakiin wax khasaare ah oo madaafiicdaa ka dhashay lama socno, ‘’ ayuu yiri afhayeenka.
Inkastoo kooxda Al-shabaab ay sheegtay in ay weerartay maalintii shalay diyaaradii uu la socday madaxweyne Xassan Sheekh ayaa haddana dhinaca kale marka la eego waxaan arinta wax war ah ka soo saareen mas’uuliyiinta dowladda ama kuwa maamulka Jubba ee magaalada Kismaayo.